Ndị na-emepụta P3 na ndị na-eweta ya | China P3 Series Factory
AMAOKWU 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar anyanwụ cell nakweere teknụzụ ohuru iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. High arụmọrụ Higher modul akakabarede arụmọrụ (ruo 17.5%) erite uru site Passivated Emmiter N'azụ Kpọtụrụ (PERC) technology. PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-light Performance Advanced iko na cell elu textu ...
AMAOKWU 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar anyanwụ cell nakweere teknụzụ ohuru iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. High arụmọrụ Higher modul akakabarede arụmọrụ (ruo 18%) uru site Passivated Emmiter N'azụ kọntaktị (PERC). PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-light Performance Advanced iko na cell elu udidi ...
AMAOKWU 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar anyanwụ cell nakweere teknụzụ ohuru iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. High arụmọrụ Higher modul akakabarede arụmọrụ (ruo 18.01%) uru site Passivated Emmiter N'azụ Kpọtụrụ (PERC) technology. PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-light Performance Advanced iko na cell elu ederede ...
AMAOKWU 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar anyanwụ cell nakweere teknụzụ ohuru iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. High arụmọrụ Higher modul akakabarede arụmọrụ (ruo 17,93%) erite uru site Passivated Emmiter Nweta kọntaktị (PERC). PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-ìhè Performance Advanced iko na elu ederede ...